❤️ Comment Télécharger Des Vidéos Instagram Sur Votre Iphone : 3 Fomba sy fampiharana - Winches Club
Ahoana ny fandefasana horonan-tsary Instagram amin'ny iPhone-nao : 3 Fomba sy fampiharana
Raha ny momba ny fandefasana horonan-tsary ao amin'ny Instagram, manana safidy vitsivitsy ianao. Azonao atao ny mamerina ny hevitrao amin'ny fampiasana sarimihetsika na tantara fohy.. afa-tsy, afaka mampiasa sequences avy amin'ny kaonty efa nampiasaina indray ianao. Misy fomba maro hisintonana horonan-tsary Instagram amin'ny findainao.
Ny lahatsoratra video Instagram dia azo alaina sy tehirizina mivantana avy amin'ny sehatra media sosialy. Ny safidy teboka telo an'ny Instagram dia tsy misy intsony hitahiry lahatsoratra video ao amin'ny tranombokinao sary. Makà sary azy, raketo ho toy ny horonan-tsary na tehirizo amin'ny alàlan'ny rindrambaikon'ny antoko fahatelo hanohanana azy.
Azonao atao ny misintona horonan-tsary sy sary Instagram raha manana iPhone na iPad ianao, fa tsy ny mifanohitra amin'izany. Ny sary sy horonan-tsary Instagram dia azo tehirizina amin'ny fomba telo samihafa amin'ny iPhone-nao, izay rehetra mampiasa ny rafitra fandidiana iOS.
Na eo aza izany fetra izany, mbola afaka mampiasa ny iPhone ianao hijerena horonan-tsary sy sary Instagram. Manaraka ato amin'ity lahatsoratra ity, Hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba fitehirizana horonan-tsary sy sary Instagram amin'ny iPhone-nao aho.
1. Misaotra ny Instagram Downloader, Tehirizo ao amin'ny Smartphone na Solosainao ny horonan-tsary sy sary Instagram.
Ny fomba haingana sy mora indrindra hamonjena sary Instagram dia ny fampiasana mpaka sary Instagram. Noho ny fampiharana maro hita ao amin'ny App Store, Tsy mora kokoa ny mitahiry sary sy horonan-tsary Instagram amin'ny findainao. Mora ny misintona sary sy horonan-tsary Instagram amin'ny findainao. afa-tsy, maimaim-poana tanteraka ny fampiasana ny maro amin'izy ireo. afa-tsy, maro amin'ireo fampiharana ireo no misy fividianana in-app, fivarotana tafahoatra sy traikefa mpampiasa intuitive.
Tsy irery ianao raha tsy hainao ny misintona votoaty Instagram. Mino izany na tsia, Eto izahay hanampy anao. Ny horonan-tsary sy sary Instagram tsara indrindra dia voatanisa etsy ambany.
\_Téléchargez des images et des vidéos Instagram pour les retweeter. Repost dia fampiharana fampakarana sary sy horonan-tsary malaza ao amin'ny Instagram izay manamora ny fizarana sary sy horonan-tsary. Noho ny endrika mora ampiasaina amin'ny fampiharana, tia mi-surf daholo izay mampiasa azy.
ii. Save Instant
Backup avy hatrany, matetika antsoina amin'ny asan'ny anarana mitovy, ahafahanao mitahiry sary sy horonan-tsary ao amin'ny Instagram mivantana ao amin'ny galerianao telefaona nefa tsy manokatra ny fampiharana. Mba hampidirana sary na video, Adikao fotsiny ary apetaho ao amin'ny bara URL an'ny fampiharana ny URL.
FastSave dia fampiharana fitahirizana Instagram malaza izay miasa amin'ny fitaovana finday sy birao. Na dia tsy mifandray amin'ny Internet aza ny findain'ny mpampiasa, mbola afaka mijery sy misintona sary ao amin'ny Instagram izy.
Saver Reposter dia manamora ny fizotry ny fitahirizana sy fandefasana sary ao amin'ny Instagram. Alohan'ny ahafahanao mizara ny sarinao sy ny horonan-tsarinao amin'ny hafa, tsy maintsy tehirizinao ao amin'ny fakantsarin'ny fitaovanao aloha izy ireo.
2. Ny fampiharana Shortcuts dia ahafahanao misintona sary avy amin'ny Instagram
Ny Shortcuts dia ahafahanao mitahiry sary sy horonan-tsary Instagram amin'ny findainao ary miditra amin'izy ireo any aoriana amin'ny alàlan'ny fampiharana Shortcuts. Ao amin'ny tontolo idealy, tsy hisy safidy hafa afa-tsy ny mampiasa rindrambaiko manokana.
Araho fotsiny ny toromarika eo amin'ny efijery mba hametrahana ny hitsin-dàlana fampidinana Instagram amin'ny iPhone.
aho. Mba hidirana amin'ny sakafo aorian'ny fakana sary na firaketana video, tsindrio ny marika ” … ” eo amin'ny zoro ambony havanana amin'ny sary na video. Ensuite, afaka misafidy ianao hoe aiza no hitazonana azy.
ii. Hita ao amin'ny faran'ny mombamomba anao ny hitsin-dàlana misintona Instagram, eo ambanin'ny faritra safidy fizarana.
iii. Rehefa mampiasa ny hitsin-dàlana voalohany ianao, hasaina ianao hamela ny fidirana amin'ny Internet sy ny fanangonanao sary. Aza atao atahorana mihitsy ny fiarovana anao amin'ny tsy fanarahana ny zava-drehetra alohan'ny hanaovanao. Rehefa vita ny sary na video, dia voatahiry ho sary nomerika ao amin'ny galeri-tsary eo amin'ny fitahirizana iPhone-nao.
3. Azonao atao ny miditra mora amin'ny atiny Instagram avy ao anaty fampiharana amin'ny alàlan'ny Jailbreak Mods.
Cydia dia fivarotana fampiharana iPhone jailbroken izay ahafahanao mitahiry sary sy horonan-tsary Instagram nefa tsy mila mampiasa ny fampiharana Instagram. Anisan'ireo vahaolana hafa maro misy, afaka mampiasa Instagram ++ na InstaTools ianao.
Lahatsoratra teo alohaManinona aho no very mpanaraka Instagram : Antony 5 sy ny fomba hamahana azy
Lahatsoratra manarakaInstagram Automation News : Instagram Automation News